အဖွားဖြစ်နေတဲ့ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ လက်တွေ့သက်သာပျောက်ကင်းတဲ့ ဆေးနည်းလေး ဝေမျှပေလိုက်ပါတယ်…! - Yuyalay
ဆေးနညျးလေးမြှဝပေေးမယျနျော။ အမှနျတော့ မတငျခငျြပါဘူး။ အဖှားဖွဈနတေဲ့ရောဂါလူသိမှာစိုးလို့မတငျခငျြပါဘူး။ ဆေးနညျးလေးမြှဝပေေးမယျနျော။ အမှနျတော့ မတငျခငျြပါဘူး။ အဖှားဖွဈနတေဲ့ရောဂါလူသိမှာစိုးလို့မတငျခငျြပါဘူး။
Previous post သဲခြေကျောက်တည်နေတာကို မခွဲလိုက်ရပဲ ကောင်းသွားတဲ့နည်းလေးမို့ မျှဝေပါရစေ…!
Next post “မွေးပြီးလို့ ပစ်ထားခဲ့ရင်တောင် မိဘကိုချစ်ပါဆိုတဲ့ #မယ်လိုဒီ”